အလင်းရောင်ကြယ်များ: April 2012
တာလတ်ပစ် ဒုံးခွင်းဒုံးအကြီးစားများ Play ဆိုသောနေရာကို မောက်ဖြင့် နိပ်ကြည့် ပါ၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/22/2012 04:13:00 am No comments:
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/20/2012 10:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Every Time You Go Away ....သီချင်း
ဒီသီချင်းလေးကို Paul Young ကသီဆိုထားပြီးEveryTimeYouGoAwayသီချင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာသံစဉ်ကို
အဆိုတော်ဇော်ဝင်းထွဋ်မှ ကြယ်တံခွန် ဟုပြန်လည်သီဆိုထားတာလည်းရှိပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/14/2012 07:47:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်း
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာဗားကျွန်း အလယ်ပိုင်း ယော့ယာကာတာ မြို့အနီးတွင်ရှိသည်။ အေဒီ ၇၅၀ နှစ် အေဒီ ၈၄၂ နှစ်အကြား တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုထည် ၂,၁၁၈,၈၈၀ ကုဗပေ ရှိသော ကျောက်သားဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ၁၁၃ ပေမြင့်ပြီး အောက်ခြေ အတိုင်းအတာသည် ၄၀၃ x ၄၀၃ ပေရှိသည်။ ၁၄ ရာစုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ဖူးပြီး ယင်းကို ဂျားဗားကျွန်းတွင် ဗြိတိန်သျှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်ခဲ့သူ Sir Thomas Stamford ( ဆာသောမတ် စတတ်းဖို့ ဒ်) က ၁၈၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရှာဖွေ တွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/12/2012 08:16:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ